XEERARKA XULASHADA IYO KORITAANKA GEEDAHA EE BALLI - INFRASTRUCTURE
Daryeelka iyo xulashada dhirta biyaha
Guri gaar ah ama waddanka, badanaa waxay dhistaan ​​kaydka macmalka. Dabcan, xaaladdan ma samayn kartid dhaqamo aan qurux badneyn oo dhismaha ah. Qodobkan waxaan ku tilmaameyn karnaa dhirta aquatic inay ku habboon yihiin balliyada iyo jirooyinka kale ee biyaha, sida loo abuuro iyo daryeelka iyaga.
Doorka dhirta ee balli
Shaki la'aan, dhaqamada sii kordhaya ee kaydka, waxay ka dhigtaa mid aad u qurux badan, asal ah oo nool.
Waa muhiim! Marka diyaarinta kaydka ku yaal dooxada, waxaa muhiim ah in la beero dhirta agagaarka wareegga si loo xakameeyo soo galitaanka biyaha iyo biyaha roobka.
Noocyo kala duwan iyo noocyo ayaa kuu ogolaanaya inaad abuurto muuqaal qurxoon oo aan ka sii xumaanaynin balli dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo hawlaha qurxinta, dhaqamada biyaha waxay qabtaan hawlo kale oo muhiim ah:
ha u ogolaan harta nafaqada dabiiciga ah iyo Bacriminta inay soo gasho balli;
biyaha ku sumooba oksijiinta inta lagu jiro maalintii;
u samee hooska biyaha dushooda, taas oo ka caawisa in looga hortago kulaylka xad dhaafka ah ee xagaaga;
ka qaybgalaan horumarinta dadweynaha bakteeriyada faa'iidada leh;
yaree xaddiga Nitrate ee biyaha.
Haddii aad rabto balli in ay had iyo jeer nadiif noqoto, noqo qurxinta boggaaga, waa inaad hubaal ka haysataa dhirta khaas ah.
Sidee loo doortaa dhaqanka saxda ah ee suunka?
Dhamaan noocyada noocyada dhaqanka biyaha ah waxay ku habboon yihiin sii kordhinta dabiiciga ah iyo dabiiciga ah. Tixgeli noocyada dhirta loo isticmaali karo kaydka dalka.
Kooxdani way ka duwan tahay dhir kale oo kale in caleemaha ay ku yaalaan dusha biyaha. Xaaladdan oo kale, nidaamka xididka ayaa lagu taagay ciidda. Dhirta noocan ah waxay u adeegtaa sida ilaalinta dusha biyaha iyo dhumucda kulaylka., waxay isticmaashaa xeryahooda dabiiciga ah, oo ka hortagaya habka "ubax" biyaha. Waxay si dhakhso ah u koraan, sidaas darteed waa muhiim inaad ilaaliso iyaga si taxadar leh iyo waqti: si joogto ah u gooyaa iyo ka saarto caleemaha aan loo baahnayn. Haddii aad isticmaasho kor u qaadida qashinka oo si fiican u koraya, waxaad ku guuleysan kartaa natiijo wanaagsan.
Biyo qoto dheer
Dhirta Kuwani waxay leeyihiin nidaam xidid ku yaal carrada hoose. Caleemaha waxay ku jiraan biyaha, on top iyaga waa ubaxyo qurux badan. Kooxo ka mid ah dhirta qulqulka badan ayaa ka caawiya daahirinta biyaha. Maqnaanshaha dalagyada noocan oo kale ah waxay keeni karaan dhalmo aan la xakamaynin algae iyo bakteeriya. Dhinaca biyaha waxaa ka mid ah ubaxa, ubaxa, baro huruud ah, vodokras, duckweed.
Dhaqamada ku dhow biyaha ayaa sidoo kale aad u caan ah. Waxay si isku dhafan u buuxiyaan habka biyaha iyo meelaha xeebaha.
Ma taqaanaa? Abuurka miraha biyaha waxay ku habboon yihiin isticmaalka bani'aadamka: iyaga oo la shiilay, waxay soo dhajiyeen cabitaan, dhadhanka oo u eg qaxwaha.
Si loo abuuro muuqaal sawir leh, dalagyada badarka waxaa badanaa loo isticmaalaa, ubax maalin-ubax ah iyo iris, dhul dabbaaldeg ah, gogol-xaar ah iyo qalab ayaa sidoo kale u muuqda mid aad u wanaagsan. Xurgufka balliigu wuxuu ku darayaa fern.
Goobta xuddadu waxay ku taallaa meel u dhaw xeebta. Geedaha sii kordhaya ee aaggan waxay u adeegi karaan xannibaad nololeed oo ka soo horjeeda biyaha ka yimaada gudaha dibedda kaydka. Waxay si fiican u koraan halkan: martigaliyaha, dayaxa, badan, astilba, cadaadis, ciriiri.
Noocyada noocan oo kale ah ee biyaha aquatic waa wax aan qabyo ahayn, sidaas darteed waxaa lagu beeray karaa labada qorraxda iyo hooska. Qodob muhiim ah oo ku saabsan daryeelka caleemaha dhiiqada leh waa meel fadhiya oo joogto ah, maadaama ay si dhakhso ah u koraan oo ay u jajabin karaan muuqaalka quruxda badan ee marsada. Waxaad dhali kartaa dhirta caynkaas ah ee balli ee dalka: Magedale Magellan, Cawshiga marsh, Marsh illoobi-aniga-ma aha.
Kuwani waa, laga yaabee, in ay faa'iido badan ka soo baxaan cimriga noolaha, taas oo lagu garto xaqiiqda ah in badi dhaqanka ay ku taal biyaha, iyo ubaxyadu inta badan dusha sare. Oxygenators ayaa ka hortagaya wasakheynta biyaha, waa cuntooyin iyo taranka noocyada qaar kalluunka.
Iyadoo ku xiran nooca geedka, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo beerto. Ka fikir mid kasta oo ka mid ah.
Si loo abuuro halabuur oo u dhow sida ugu macquulsan ee dhul dabiiciga ah, beeritaanka dhirta waxaa lagu fuliyaa ciidda biyaha jirka. Meesha horay loo soo doorto waxaad u baahan tahay inaad dhigto 20-30 cm oo substrate ah. Laga soo bilaabo kor ku xusan waa lagama maarmaan in la daboolo lakabka khafiifka ah ee quraarada, taas oo ka hortagi doonta dusha sare ee ka soo baxaya xilliga buuxinta balli biyo.
Waa muhiim! Dhirta waa in lagu beeraa oo kaliya biyo kulul oo degan (ilaa 10 maalmood). Haddii kale dhaqamada ma qaadan doonaan xidid waxayna dhakhso u dhintaayaan.
Haddii aadan rabin in aad gabi ahaanba buuxiso kaydka carrada, waxaad abuuri kartaa godadka dhulalka iyo soo saar lakabka substrate iyaga. Pitches kala badh mitir laba jibbaaran oo leh qoto dheer oo ah 40 cm ayaa ku filan xitaa ballaadhinta foornada biyaha. Faa'iidada ugu weyn ee isticmaalka godadka cirifka ayaa la xidhiidha geedi socodka lagaga saarayo caleemo aan loo baahnayn iyo qaybo ka mid ah is-qabsiga - aag kooban oo aad u sahlan in la sameeyo marka loo eego si loo xakamiyo xididdada cufan ee hareereeyey dhammaan hoosta balliiga.
Weelasha caagga ah, iyo sidoo kale dheriyo yar, waxay abuuraan 3 dhibaatooyin halis ah: la'aanta xasillooni la'aan, la'aanta nafaqooyinka iyo xaddidaadda horumarinta dabiiciga ah ee dalagyada. Marka dhirta dhirta lagu beero weel, xasilooni waa in la hubiyaa. Dhaqamadaas oo kale, weelasha waaweyn ee aan ahayn kuwo aad u sarreeya waa kuwo ku habboon. Si aad u kordhiso xasiloonida, waxaad xoojin kartaa kartida dhagaxyada ku yaal dhulka dushiisa. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa miisaanka miisaanka hoose ee ugu hooseeya taangiga.
Haddii dhulka la qorsheeyo aagga xeebta, weelka waxaa lagu dhejin karaa xeebta. Dhirta si dhakhso ah u nuugo nafaqooyinka ka soo substrate, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u quudiso. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in daloolka hoose ee hoose, taas oo fududeyn doonta nuugista biyaha. Laakiin, nasiib daro, iyaga oo u maraya xididdada waxay geli karaan kaydka laftiisa. Soo degidda weelasha waxay leedahay wax badan oo dhibaato ah, sidaas darteed haddii aad awooddo, waa inaad siisaa.
Habkani wuxuu beertu ku lugleeyahay dhajinta geedaha ee balli. Nidaamka asaasiga ah, caleemaha iyo jirriduhu waxay si joogto ah ugu jiri doonaan biyaha oo lacag la'aan ah. Nasiib darro, dhaqannada noocan oo kale ah way dhimanayaan marka heerkulka biyaha iyo hawadu hoos u dhacaan, markaa ka hor inta aaney bilaabmin qaboobaha qaboobaha waa in laga saaraa kaydka, iyo marka la yimaado guga, waa in mar kale lagu beeraa.
Talooyinka guud ee daryeelka
Dhirta biyaha ee balli loo baahan yahay daryeel. Helitaanka nidaamka nadiifinta waxay ka dhigeysaa mid aad u sahlan in lagu hayo balli artifishal ah - kiiskan, waxaa haboon in la gooyo caleemaha xad dhaafka ah, xididada iyo algae. Haddii aad go'aansato inaad ku kaydiso kaydka macmalka ee goobta, waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso talooyinka soo socda:
Biyaha, oo leh cabbir yar, waxay u badan tahay inay "ubaxdo" iyo biyo kulul.
Ma taqaanaa? The lotus waa mid ka mid ah dhirta yar oo kori karto in ka badan 1000 sano oo awood u leh inuu dib u soo kabsado ka dib nasasho dheer.
Si aad u soo saarto dhir aan loo baahneyn dusha sare, shabaqa, qallajin, ama qalab gaar ah ayaa sameyn doona. Waxaad sidoo kale jari kartaa caleemaha dhintay iyo geedo kale oo leh maqas oo leh qabasho dheer oo telescopic ah.
Iyadoo hargab qabow ah, waxaad u baahan tahay in aad jarjartid dalagyada dalagga dalagga ah oo ku rid dhalada ilaa guga. Haddii dhirta aysan haysan iska caabin adag, waxay lagama maarmaan u tahay in ay u guurto xaalado badan oo raaxo leh, kuleylka jiilaalka.
Xannaanada waa in si joogto ah looga saaraa duckweed. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la gooyo ubaxyada hore u dhintay.
Daryeelka joogtada ah ee kaydka, ma jiri doonto wax dhib ah oo la xidhiidha dayactirka, laakiin marwalba waad ku raaxeysan kartaa biyaha quruxda badan ee goobtaada.
Qaababka naqshadaynta kaydka
Si aad u qalabeysid biyaha macaan ee quruxda badan, waxaa muhiim ah in la raaco talooyinka qaarkood. Tixgeli sida iyo waxa dhirta ay u fiican tahay in la soo saaro kaydka noocyada kala duwan.
Haddii aad go'aansatid inaad kaydiso kaydka weyn ee goobta, waa inaad raacdaa xeerarka qaarkood:
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad sameyso mashruuc. Aag ballaaran ayaa abuuri doona hannaan asal ah oo qurux badan.
Kaydka, oo qoto dheer oo ka mida 1 m, waxay leeyihiin nidaam deggan oo xasilan, marka la barbardhigo barkadaha gacmaha. Inkasta oo ay le'eg tahay xajmiga, daryeelida biyo badan oo waaweyn ayaa sahlan.
Haddii aad haysato dhul ballaaran oo aad ku qotonayso, waxaad isticmaali kartaa sanduuqa, eefedra iyo sheygaarka si aad u abuurto asalka.
Badan, lysikhitron iyo funky waxay u ekaan doonaan si isku xigta iyaga oo ku xiga mashaariic waaweyn oo biyo ah.
In balli, jasiiradaha yaryar ee ku hareereysan thickets qafiif ah dhexdhexaad ah arki doonaa weyn.
Dhulka dushiisa waxaa lagu dhejin karaa lakabyo iyo noocyo badan.
In balli ballaaran, dhaqanka sida bakeeriga Chilim ayaa xididada si fiican u qaadan doona. Marka laga soo tago muuqaalka quruxda, waxay leedahay miro, ku habboon isticmaalka.
In aad haysato biyo yar oo biyo ah ayaa beddeli doona goobtaada. Biyo yar oo biyo ah ayaa guriga u noqon kara noocyada noolaha ah sida tritons, rash, iyo cabsida biyaha.
Waa muhiim! Marka la gaaro guga, waa lagama maarmaan in la badalo ugu yaraan afar meelood oo biyo ah ee kaydka ah si ay u bixiyaan dhirta iyo kaluunka leh jawi caafimaad qabta oo caadi ah.
Marka aad dooranaysid dalagga beeritaanka ee balli yar, waa muhiim inaad si taxadar leh u eegto heerka koritaanka. Geedaha si dhakhso ah u daboolaya dusha biyuhu waxay beddeli kartaa jirka quruxda badan ee biyaha ah oo galbeed.
Xulo dhir daboolaya dusha sare leh caleemaha yaryar. Boorag biyo ah oo wanaagsan, iyo ubax lagu qurxiyo. On xeebta, waxaad ku dallaci kartaa qaybo caadi ah, nadiif caadi ah, a illoobi-aan-aan-dhiiqo iyo dhagaxa webiga. Haddii aad jeceshahay dhaqamada sare, bamboo, sedge, foxglove ayaa sameyn doona.
Gobollada Geometric waxay u muuqdaan kuwo kufilan guryaha guryaha caadiga ah. Foomka barkin dabiiciga ah wuxuu noqon karaa mid kala duwan: laba jibbaaran, leydiin, wareeg ah. Darbiga sare waxaa inta badan lagu dhisaa meelo. Qaab dhismeedka noocan oo kale ah waxaad u baahan tahay inaad doorato dhaqanka oo xoojinaya joometerigeeda. Wixii jajabinta sanduuqyada ku haboon, dalladaha loo yaqaan, ivy. Waxaad qurxin kartaa biyaha dushiisa, ugudhafka biyaha. On xeebta waxay u egtahay inay ahaato xayawaan jilicsan iyo daylooyinka.
Sida caadiga ah, baaxada meydadka biyaha ee noocan oo kale ah ma aha mid aad u ballaaran. Waxaa lagula talinayaa in aan ka badnayn saddex nooc oo dhir ah oo qiyaas yar. Sedge, iris iyo iridaha ayaa si weyn u eegi doona heer sare. Heerka hoose, waxaa ka wanaagsan in la gooyo xayawaanka, dharka iyo sabelnik. Bartamaha waxaad ku dhejin kartaa pistia ama faashad adag.
Si loo dhiso kanaalka waa ka wanaagsan yahay isticmaalka dhagaxyada iyo dhagaxyada. Waxaa ka mid ah dhirta, waa in aad doorato noocyada oohin: larch korka ubax, kedar, safka French. On the xeebta, waxaad ka heli kartaa digicers, irises macaan, hvoyniki. Buundooyinka waxaad ku kori kartaa algae.
Ma taqaanaa? Lemna waa mid ka mid ah dhirta biyaha ah ee jabiya dhammaan diiwaangelinta taranka: qiyaastii 33,000 caleemood ayaa ka muuqan kara 1 caleen 30 maalmood
Si aad u abuurto dooxada buurta waxaad u baahan tahay inaad doorto meel leh jiir. On bangiyada waxay arki doonaan duurka ubax qurux badan. Waxaa lagula talinayaa in la dhigo meel biyo ah oo aan iloobin-aan-lahayn, sedge-dwarf dusha sare ee biyaha. Qeybta hoose ee daadka, waxaad u baahan doontaa inaad dhisto weel yar oo biyaha ay soconayaan.
Iyada oo la dhiso goobta goobta kaydka macmalka ah iyo gumeysiga dhirta ay tahay in si dhab ah loo wajaho. Si kastaba ha ahaatee, natiijadu waxay noqon doontaa mid u qalantaa, oo waxaad ku raaxeysan kartaa quruxda maskaxda ah ee suuligaaga biyaha ah.